Kedu otu esi ahọrọ ma zụta ụgbọ mmiri na-agba ọsọ ọsọ ọsọ?
Home / Foset Guide / Kedu otu esi ahọrọ ma zụta ọkpọkọ mmiri ọkụ na-agba ọsọ?
Kedu otu esi ahọrọ ma zụta ọkpọkọ mmiri ọkụ na-agba ọsọ?
2020 / 10 / 20 nhazi ọkwaFoset Guide 1552 0
Ọtụtụ ezinụlọ iji gosipụta ihe dị mma, ga-arụnye iji melite pọmpụ mmiri, mana ọ bụghị ewu ewu kpamkpam. Yabụ kedu maka ọkpọkọ mmiri ọkụ na-agba ọsọ? Kedu otu esi azụta ngwa ngwa mmiri ọkụ? Lee lee ya anya.
Ọsọ mmiri mmiri ọkụ dị mma?
Igwe mmiri na-ekpo ọkụ ọkụ dị mkpa maka mmiri ọkụ, enwere ike imeghe ọkpọ ahụ maka sekọnd abụọ ma ọ bụ atọ iji nweta mmiri ọkụ ọkụ ngwa ngwa, dị oke ọsọ ma dịkwa mma. Mmiri ọkụ a na-ekpo ọkụ ugbu a na-ekpo ọkụ na mmiri ọkụ ya na mmiri ọkụ ndị ọzọ ma e jiri ya tụnyere mmiri ọkụ a na-ekpo ọkụ ugbu a, mmiri ya dị ezigbo ike, na ojiji anyị apụtaghị mgbe mmiri dị ọkụ na-adị oyi, ihe a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ugbu a. arụnyere na ụlọ, ọ naghị etinye ohere, na ntinye na ojiji dịkwa oke mfe.
Atụmatụ ngwa ngwa mmiri ọkụ.
1, ọkpọkọ mmiri ọkụ ọkụ ọkụ n'ihi ọrụ ọkụ ọkụ ya nwere ike dochie ọkpọkọ mmiri, nke a makwaara dị ka "ọkpọkọ eletriki", bụ ụdị nke a na-ejikọghị ma ọ bụ nke dị ntakịrị nke na-etinye ihe na mmiri na-enweghị mkpuchi, ọ bụ naanị nchekwa nwa oge nke mmiri ọkụ , na njikwa nke ngwaọrụ okpomọkụ nke obere mmiri ọkụ eletrik.
2, ọkụ eletrik ngwa ngwa na-azọpụta ike, bụ ojiji nke titanium pụrụ iche na ihe ndị ọzọ na-eguzogide ọgwụ dị elu magnetik nke ibe, nke mere na mmiri dị na ndọta magnetik n'okpuru ọrụ nke ọkụ ọkụ ọkụ ozugbo. Igwe mmiri nwere ike ịdabere na mmiri ahụ iji dozie ike ahụ, iji kwado oge dị iche iche nke mmiri mmiri chọrọ iji weta.
3, ọkụ eletrik na-ekpo ọkụ ngwa ngwa: 5 sekọnd iji nye 30-60 ogo nke mmiri ọkụ, ya bụ, oghe ọkụ, iji mezuo ụkpụrụ dị elu nke ndị mmadụ nke oge a, ndụ chọrọ ngwa ngwa.
4, ọrụ ọkpọkọ eletriki dị mfe: otu njikwa ọrụ nwere ike ịghọta mgbanwe mmiri, ike na ngbanwu, nhazi ọnọdụ mmiri, nhazi mmiri, ọkụ ọkụ na oyi anaghị akwụ ụgwọ.
Mmiri mmiri ngwa ngwa maka ezinụlọ ugwu na-aba nnukwu uru, nwere ike izute ngwa ngwa mkpa maka mmiri ọkụ, mgbe ahụ na nzụta kwesịrị ị toa ntị na nsogbu dị a ?aa? Olee otú ịhọrọ ma zụta ọkpọkọ?
Esi họrọ na ịzụta?
1, nghọta karịa banyere ndị na-emepụta ihe
Ọnwụnwa nke ọnụ ala dị ala, na-ege ụfọdụ ndị ntị mgbe ụfọdụ banyere ahịa 50 nke yuan bụbu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ngwa ngwa eletriki eletriki ngwa ngwa, ndị nrụpụta dị otú ahụ abụghị ndị nrụpụta oge niile, iji hụ na ndị nrụpụta ga-erite uru n'ihe banyere ahịa ahịa. , 30% n'okpuru ọnụahịa ụlọ ọrụ gara aga, ogo nke enweghị nkwa ọ bụla, a na-atụ aro ka ị mụtakwuo banyere ndị nrụpụta ole na ole, chịkwaa ahịa ndị bụ isi.
2, mata 3C
A ga-enwerịrị asambodo 3C, ma nyochaa, 3C bụ asambodo amanyere iwu mba, mana yana, asambodo a chọrọ, na mgbakwunye, ọtụtụ ihe ndị ọzọ asambodo dị iche iche dịka ngwaahịa ndị a tụkwasịrị obi, ngwaahịa ndị ama ama na ihe ndị ọzọ bụ mmiri, bụ na ị nwere ike imefu ego ịzụta. Mana asambodo 3C abụrụkwa nke adịgboroja na nke adịgboroja, asambodo ha bụkarịrị mbipụta na enweghị nke mbụ.
3 、 Ike
Mgbasa mgbasa ozi na-adịghị ike, njirimara doro anya bụ ike nke ngwaahịa akpọrọ 800-1500W, nke a na-akpọ ike dị ala iji dọta ndị ahịa n'ime ọnyà ahụ, ụlọ ọrụ ahụ maara na ọkpọkọ eletriki ngwa ngwa bụ ụdị okpomọkụ na-emeghe, ọ bụghị ụdị nchekwa mmiri, iji hụ na mmiri ọkụ, ma ọ dịkarịa ala ike 2000W, ka o wee baa uru n'oge oyi, ọ bụrụhaala na ike erughị 2000W, bụ isi aghụghọ, na oge oyi na mmiri ọkụ agaghị eru mmetụta!
Nke gara aga :: Na-anwa anwa zụta ụlọ ịsa ahụ na-asa ahụ maka ihe na-erughị $ 20? Osote: Họrọ Rightlọ Nri Kwesịrị Ekwesị